Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ
နောက်ဆုံးရောက်ရှိ KIS/KAV 2010 ( 9.0.0.459_463_736 ) - OFFLINE UPDATES များ
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun Apr 11 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun Apr 18 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun Apr 25 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun May22010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun May92010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun May 16 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun May 23 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun May 30 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Mon June72010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun June 13 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun June 20 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun June 27 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun July42010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun July 11 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Sun July 18 2010
Updates Distribution for KAV / KIS 2010 Mon August 16 2010
Kaspersky ဆိုတာ PC protection software တွေထဲမှာ နာမည်ရတဲ့ Software တစ်ခုဆို မမှားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူတော်တော်များများလည်း ခုချိန်မှာ Kaspersky Internet Security နဲ့ AntiVirus ကို အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
AntiVirus ဒါမှမဟုတ် PC security software ဆိုတာဟာ သူ့ software နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ frequent updates ကိုပုံမှန်မရဘူးဆိုရင် စက်ထဲမှာ install လုပ်ထားလည်း ကိုယ့်ကွန်ပြူတာအတွက် ပြည့်ဝတဲ့ ကာကွယ်မှုကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ အချိန်နဲ့အမျှ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ အသစ်အသစ်သော viruses, spyware, Trojans, worms, နဲ့ bots တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကိုလည်း ဟန့်တားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် antivirus တင်ထားပြီး internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးအတွက်တော့ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် antivirus တော့တင်ထားပါရဲ့ offline ထားထားရတဲ့ ( ဆိုလိုတာ internet connection မရှိတဲ့ ) ကွန်ပြူတာမျိုးဆို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်လို အင်တာနက်ဆိုင်သွားမှ connection ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဆိုရင် ဒီ viruses, spyware, Trojans, worms, နဲ့ bots တွေရဲ့ ကျက်စားပျော်မြူးရာ စားကျက်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့တွေ ခုချိန်မှာသာ internet ကို အလွယ်တကူရနေလို့ ဒီပြဿနာကို မျက်ကွယ် ပြုနိုင်နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့် ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ ဒီပြဿနာကို အလူးအလဲ ခံနေရပါတယ်။ ဟိုတစ်လောက ကျွန်တော့် အကိုတစ်ယောက် Online ရောက်လာပြီး သူ့ Laptop - virus မိနေလို့၊ တင်ထားတာ KAV ၊ updates က connection မရှိလို့ နှစ်ချို့နေပြီး virus ကိုမသတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ငြီးပြပါတယ်။ ကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ KIS / KAV သုံးသူ users ပေါင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်လောက်များရှိနေနိုင်ပါသလဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သူတို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင် ဒီစာရေးဖြစ်လိုက်ပါတယ်။
Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းတွေကို အရင်မပြောခင်မှာ အရင်ဆုံး လေ့လာရမှာက ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတာ Kaspersky Internet Security / AntiVirus ထဲက ဘယ် versions ကိုသုံးနေလဲ ဆိုတာပါ။ Kaspersky Labs ကနေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးအစားတွေ များစွာထဲကမှ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ offline updates လုပ်ဆောင်ပုံကို ကျွန်တော် လိုက်ရေးပြရမယ် ဆိုရင် ဒီအကြောင်းအရာက တော်တော်နဲ့ ပြီးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး versions လည်း ဖြစ်။ လူတော်တော်များများလည်း သုံးနေကြတာ ဖြစ်တဲ့ Kaspersky Internet Security / AntiVirus 9.0 (2010) ကိုပဲ Offline Update လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်လိုက် ရေးသားသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုများရဲ့ စက်မှာ တစ်ခြား Versions တွေ ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင် Kaspersky Internet Security / AntiVirus 9.0 (2010) ကိုပဲ ပြောင်းသုံးဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ Kaspersky Internet Security / AntiVirus 9.0 (2010) Latest versions တွေ download ရယူနိုင်ဖို့ကတော့ ဒီနေရာကနေ သွားပါ။
Offline Update မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်နည်း။
Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်း - နည်းလမ်း ( ၃ ) ခုရှိပါတယ်။
* Local folder မှ Kaspersky Updates အားရယူ install လုပ်ဆောင်ခြင်း။
* Updater.bat file အား အသုံးပြု၍ install လုပ်ဆောင်ခြင်း။
* Stand-alone update utility " Updater.exe " အား အသုံးပြု၍ Updates ရယူလုပ်ဆောင်ခြင်း။
ကျွန်တော် တစ်ဆင့်ခြင်း အသေးစိတ် ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပြီး Update လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက်ကတော့ Iအဆင့် ( ၂ ) ဆင့် လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာ ၂ လုံး အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ကွန်ပြူတာ ( ၂ ) လုံးလုံးမှာ ကိုယ် update လုပ်ချင်တဲ့ Kaspersky product အမျိုးအစား တစ်ခုတည်းကိုပဲ install လုပ်ဆောင်ထားရပါမယ် ( ဥပမာ - 9.0.0.736 )။ အဲ့ဒီ့ ကွန်ပြူတာ ( ၂ )လုံးထဲက တစ်လုံးဟာ internet နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး Kaspersky lab sever ကနေ anti-virus databases ကို ပုံမှန် ရရှိနေတဲ့ ကွန်ပြူတာမျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။ နောက် ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးက Offline ဖြစ်နေလို့ရပါတယ်။ အခု offline ဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာက ခုနက အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာဆီမှာရှိနေတဲ့ anti-virus databases တွေကို ပြောင်းလဲ ချိတ်ဆက်ပြီး offline updates လုပ်ဆောင်မှာပါ။ ဒီနည်းက ဘယ်တွေမှာ အသုံးဝင်သလဲ ဆိုရင် ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ ရှိနေတဲ့ Network တစ်ခုမှာ စက်တစ်လုံးကပဲ internet connection ရှိနေယုံနဲ့ တစ်ခြား offline ဖြစ်နေတဲ့ computer အားလုံး anti-virus databases ကို online တက်စရာ မလိုပဲ ပုံမှန်ရရှိသွားမှာ မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
* ပထမအဆင့် - Kaspersky lab sever မှ anti-virus databases ပုံမှန်ရရှိနေသော ကွန်ပြူတာမှနေ၍ Updates များအား ခွဲဝေယူခြင်း။
ဒီနည်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Network ထဲက ကွန်ပြူတာတစ်လုံးအနေနဲ့ အစားထိုးတင်ပြလိုက်ပါမယ်။ anti-virus databases ကို ရယူမယ့် ကွန်ပြူတာက internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရရှိလာတဲ့ anti-virus databases ကို Update distribution လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်ကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ Update distribution က ဘယ်နေရာမှာ ရှိလဲဆိုတာ အရင်လေ့လာတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Windows XP မှာဆိုရင် Update distribution folder ဟာ \_Documents and Settings\_All Users\_Application Data\_Kaspersky Lab\_AVP9\_Update distribution မှာတည်ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် hidden ဖြစ်ပါတယ်။ Windows Vista မှာဆိုရင် \_ProgramData\_Kaspersky Lab\_AVP9\_Update distribution မှာ တည်ရှိပါတယ်။ Hidden ကိုဖော်ဖို့ကတော့ My computer > Tools > Folder Options > View > Show hidden files and folders မှာ check ပေးပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ ဖော်ပြပါ နေရာမှာ Update distribution ဆိုတဲ့ folder ရှိမနေရင် create လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Internet နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ Kaspersky update databases တွေကို copy ကူးယူဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်ကတော့ ဒီအောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
* Main application window အားဖွင့်ပါ။
* ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားမှာ ရှိနေတဲ့ Settings ကို click ပေးပါ။
* Settings window ထဲမှာ My Update Center ကို select ပေးပါ။
* ဖော်ပြထားတဲ့ window ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ section ထဲက Copy updates to folder ကို check ပေးပါ။
* Browse button ခုနက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Update distribution folder ဆီကို လမ်းညွှန်ပေးပါ။
* ဖွင့်ထားတဲ့ Windows တစ်ခုချင်းစီကို OK ပေးပြီးပိတ်ပါ။
* ပြီးသွားရင် anti-virus databases ကို Run ပါ။
လုပ်ဆောင်ပုံ အသေးစိတ်ကတော့ အောက်မှာ ပုံနဲ့ ထပ်ပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ KIS 2010 အတွက် လုပ်ဆောင်နည်း ပုံပါ။
ဒါကတော့ KAV 2010 အတွက် လုပ်ဆောင်နည်း ပုံပါ။
* ဒုတိယအဆင့် - ခွဲဝေပြီးသော Update distribution အားအသုံးပြု၍ Internet connection မရှိသော အခြားစက်များတွင် update ပြုလုပ်ခြင်း။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း Update distribution folder ထဲကို update databases တွေရောက်ရှိသွားပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ folder ကို တစ်ခြား removable media တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး save - နောက် update ပြုလုပ်မယ့် ကွန်ပြူတာဆီ ယူသွားတဲ့ နည်းနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပြူတာ ( ၂ ) ခုလုံးက Network ထဲမှာဆိုရင် network ကနေ တစ်ဆင့် Share ပေးတဲ့ နည်းနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Update distribution folder ကို တစ်ခြား ကွန်ပြူတာ တွေကနေ access လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ရပါမယ်။ အဲလို စီစဉ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ Internet connection မရှိတဲ့ Kaspersky ကို Update ပေးဖို့ အောက်ပါနည်း အတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါမယ်။
* ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ window မှာ တွေ့ရတဲ့ Update Source section က Settings ကို click ပေးပါ။
* အဲကနေမှ တဆင့် Source tab ရဲ့အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Add link ကို click ထပ်ပေးပါ။
* Browse ကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ Update distribution folder ကိုဘယ်မှာ save ထားခဲ့သလဲ ( ဆိုလိုတာ USB ထဲမှာဆို USB ထဲက Update distribution folder ရှိရာဆီ၊ Network ထဲမှာ ဆို Network ထဲက Update distribution folder ရှိရာဆီ ) လမ်းညွှန်ပေးရပါမယ်။
* OK ကို နှိပ်ပါ။
* Source tab ရဲ့အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Kaspersky Lab’s update servers check box ကို clear ပေးပါ။
* OK ပေးပါ။
* Update process ကို စ Run ပါ။
ဒီနည်းကလည်း အဆင့် ( ၂ ) ဆင့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာပါပဲ။ အခုဖော်ပြပါနည်းက Internet connection ရှိပြီး KAV/KIS 2010 မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား antivirus တစ်မျိုးမျိုးသုံးထားတဲ့ သို့မဟုတ် KAV/KIS 2010 မဟုတ်ပဲ တစ်ခြား versions ဖြစ်နေတဲ့ စက်ကနေ ပထမဦးဆုံး KAV/KIS 2010 အတွက် updates ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချ - ရလာတဲ့ ဖိုင်တွေကိုမှ Internet connection မရတဲ့ စက်တွေဆီ ယူသွားပြီး update လုပ်ရမှာ မျိုးပါ။
* ပထမအဆင့် - databases များအား Update.bat file အားအသုံးပြု၍ Download ပြုလုပ်ခြင်း။
Update.bat file ကို ဘယ်နားကနေ ရမလဲ ??
Update.bat file ဆိုတာ Kaspersky Labs ကနေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ small tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး KIS 2010 အတွက် ဒီနေရာကနေ ရယူနိုင်ပြီး KAV 2010 အတွက် ဒီနေရာကနေ ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ tool ကို HD ပေါ်က partition တစ်ခုခုပေါ် ဖြည်ချပြီး run ရင်လို့လည်း ရသလို ၊ USB storage device ထဲမှာ ဖြည်ချပြီး run လို့လည်း ရပါတယ်။ ဘယ်နားကနေ run - run အဲ့ဒီ့ tool run တဲ့ နေရာမှာ KAV/KIS 2010 အတွက် လိုအပ်တဲ့ updates ဖိုင်တွေကို အလိုလျောက် save ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲလို run တဲ့ အချိန်မှာ Error တစ်ခုခု တက်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒီနေရာက ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ပါလာတဲ့ rar ဖိုင်ထဲက ဖြည်လိုက်လို့ ထွက်လာမယ့် ဖိုင် ( ၄ ) ခုကို Update.bat file ရှိနေတဲ့ ဖိုဒါထဲ ပြန်ထည့်ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ။
ဒီ Tool ကို ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ ??
ဒေါင်းလုပ်ချပြီး ဖြည်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခုလို ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း ဖိုင် ( ၃ ) ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ (kis9_459_463_736.ini / Updater.bat / Updater.exe) လောလောဆယ် ကျွန်တော် KIS အတွက်ပဲ ပြသွားပါမယ်။ KAV ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာ အဲ့ထဲက Update.bat ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို double-click ပေးယုံပါပဲ။ တစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ command prompt windows ပေါ်လာပြီး သက်ဆိုင်ရာ KIS ဆို KIS ၊ KAV ဆို KAV - Updates တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်ချနေစဉ် အတော်အတွင်းမှာ ခုလို မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြပါ အတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ ခုနက ဖြည်လို့ ကျလာတဲ့ ဖိုင် ( ၃ ) ဖိုင်နေရာကို နောက်ပေါင်း ဖိုင် ( ၃ ) ခု နောက်တိုးရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
အဲ့နောက်တိုးထဲမှာ ပါလာတဲ့ Temp ဆိုတဲ့ folder က လတ်တလော ဒေါင်းလုပ်ချနေစဉ်အတော အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ဆဲကာလ ဖိုင်တွေကို save ထားမယ့် နေရာ ဖြစ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ချမှု လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးတာနဲ့ သူ့ Temp ထဲက updates တွေ အားလုံးကို Updates ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲ Copy လွှဲပြောင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆိုလိုတာက Updates အားလုံး ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သွားချိန်မှာ Temp ဖိုဒါဟာ ဥပမာ - 148 MB ရှိနေတယ် ဆိုရင် Updates ဖိုဒါဟာလဲ Temp ဖိုဒါကနေ Updates ကို လွှဲပြောင်းပေးထားလို့ 148 MB အနေနဲ့ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Updates ဖိုဒါဟာ Internet connection မရတဲ့ စက်တွေမှာ ရှိနေတဲ့ KIS/KAV တွေကို updates ပေးဖို့ ဖြစ်ပြီး Temp ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ် Update.bat ကို ပြန် run ပြီး updates ကို ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချတဲ့ အချိန်မှာ ( ၁ ) ကနေ ပြန်စချစရာ မလိုပဲ လိုအပ်တဲ့ နောက်တိုး updates လေးတွေကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့လိုအောင် နဂိုအတိုင်း ထားရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Update - ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာအား မရှင်းလင်းသေးလျှင် ( သို့တည်းမဟုတ် ) နောက်တိုး Updates download ရယူခြင်းအား အသုံးမပြုတတ်သေးလျှင် အဆင့်လိုက် မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဤနေရာတွင် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းထားပါသည်။
ဒေါင်းလုပ်ချနေတဲ့ windows ပျောက်သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ အဲဒီ့ update utility ဖိုင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ iupdater.txt ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး ခုလိုစစ်ကြည့်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း တွေ့ရပြီ ဆိုရင် updates အားလုံးရပါပြီ။
Download ချဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်လောက် ကြာမြင့်နိုင်ပါသလဲ ??
ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါင်းလုပ်စချတာ ဆိုရင်တော့ ဒီ Update ပမာဏက 50-80 MB ကြား ( ခုကျွန်တော် ချတာတော့ KIS 2010 က 148 MB ) ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ connection speed ပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်တော့ ကြာမြင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာ ပြောထားခဲ့ပြီးသလို ဒေါင်းလုပ်ချတိုင်း အဲလောက် နောက်မကြာတော့ပါဘူး။ တစ်ခါ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ပြီးတာနဲ့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ချတဲ့ အချိန်မှာ နောက်တိုး updates တွေကိုချည်း tool က အလိုလျောက် ဒေါင်းလုပ်ချပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
* ဒုတိယအဆင့် - Internet connection မရှိသော အခြားစက်တွင် update လုပ်ဆောင်ခြင်း။
update databases တွေရရှိပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ folder ကို တစ်ခြား removable media တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး save - နောက် update ပြုလုပ်မယ့် ကွန်ပြူတာဆီ ယူသွားတဲ့ နည်းနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပြူတာ ( ၂ ) ခုလုံးက Network ထဲမှာဆိုရင် network ကနေ တစ်ဆင့် Share ပေးတဲ့ နည်းနဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Update distribution folder ကို တစ်ခြား ကွန်ပြူတာ တွေကနေ access လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ရပါမယ်။ အဲလို စီစဉ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ Internet connection မရှိတဲ့ Kaspersky ကို Update ပေးဖို့ အောက်ပါနည်း အတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါမယ်။ ဒီပုံမှာတော့ removable disk ကနေ Updates ဖိုင်တွေ ယူသွားပြီး Internet မရှိတဲ့ computer မှာ update လုပ်ဆောင်နည်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖော်ပြပါ ပုံကတော့ KIS 2010 အတွက် လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်ပါ။
ဒီအောက်က ပုံကတော့ KAV 2010 သမားတွေ အတွက်ပါ။
မှတ်ချက် အနေနဲ့ - အထက်ဖော်ပြပါ update လုပ်ဆောင်မှုဟာ kaspersky lab sever မှာ offline user တွေအတွက် ဖြည့်သွင်းပေးထားသလောက် update databases ကိုသာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး အချိန်နဲ့ အမျှ တိုးနေတဲ့ databases မှန်သမျှကိုတော့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူ့က ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို သုံးပြီး Start update လုပ်လိုက်ရင် database က Out of date ဆိုပြီးပြမြဲ ပြနေတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ( ၁၁ .၄. ၂၀၁၀ ) က ချထားတဲ့ Updates ဖိုင်ကို ၃၀.၄.၂၀၁၀ လောက်မှ update လုပ်မယ် ဆိုရင် Out of date ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လ နဲ့ချီပြီး databases က out of date ဖြစ်နေတာ မျိုးထက်စာရင်တော့ ရက်ပိုင်းလောက် ခြားပြီး Out of date ဖြစ်နေတာက တော်သေးမယ် လို့ ပြောလို့တော့ ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကတော့ ပြည့်စုံစေချင်လို့ သီးသန့်ထပ်ပေါင်း ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အပေါ်က နည်းလမ်း ( ၂ ) မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင် ဒီ အဆင့်ကို ကျော်သွားလို့ ရပါတယ်။ ဒီ Stand-alone update utility " Updater.exe " ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Kaspersky Lab ကထွက်သမျှ applications အားလုံးအတွက် Updates တွေကို တစ်နေရာတည်းကနေ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း download ချနိုင်အောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်ပါ။
* KLupdate.zip ကို ဒီနေရာကနေ ပထမဆုံး ဒေါင်းလုပ်ချပါ။
* Unpack လုပ်ပြီး application ကို စ run ပါ။
* အကြံပြုချင်တာက အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း " Download databases for the selected products: " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါရှိနေတဲ့ Kaspersky အမျိုးအစားပေါင်းမြောက်များစွာထဲက မိမိကွန်ပြူတာမှာ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Updates ပေးချင်တဲ့ အမျိုးအစား ရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ check box မှာ အမှန်ခြစ် ပေးပြီး Apply ကိုပေးပါ။ အဲလိုမရွေးပေးပဲ Apply ပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် databases ကို download ချတဲ့ အချိန်မှာ Kaspersky ကထုတ်ထားသမျှ versions တိုင်းအတွက် Updates တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချမှာ ဖြစ်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ချချိန်ကလည်း အရမ်းကို ကြာမြင့်သွားပါလိမ့်မယ်။
* အားလုံး ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သွားပြီ ဆိုရင်တော့ Updates ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ လိုချင်သမျှ updates အားလုံးရောက်ပါပြီ။ ရလာတဲ့ Updates တွေကို တစ်ခြားစက်မှာ Update ပေးပုံပေးနည်းကတော့ အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ ဖော်ပြချက် အတိုင်းပါပဲ။ အပေါ်က Internet connection မရှိသော အခြားစက်တွင် update လုပ်ဆောင်ခြင်း ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြန်ကြည့်ပေးပါ။
KIS 2010/2009 နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရက်ခြား ရက်ခြား Offline Update တင်ပေးထားတဲ့ နေရာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီအောက်က Link ကနေ သွားပါ။
Offline Virus Database Updates!
ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆင်ပြေကြလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ဆက်စပ်ပြီး ဖော်ပြချင်တာလေး တစ်ခု ကျန်ပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ KIS/KAV ကို offline updates အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ဒီနေရာကနေ တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် ပုံမှန် Offline Updates တွေ တင်ပေးချင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ Offline Virus Database Updates! ဆိုတဲ့ နေရာက Updates က အချိန်တိုင်း Updates မဖြစ်ပါဘူး။ အဲတာကြောင့် ဖိုရမ် ကြီးကြပ်သူများ တစ်ချက်လောက် အကြံပြုကြပါ။ သဘောတူမယ် ဆိုရင် တင်ပေးပါ့မယ်။ အပတ်စဉ် အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တစ်ခါ Offline Updates ကို ( Sunday ) တိုင်း နေ့စွဲနဲ့ တင်ပေးသွားဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 20-08-2010 at 04:20 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, ဂတုံးလေး, စနိုးလေး, ဆန်းမောင်, ထွန်းဝင်းနိုင်, ပုထုဇဉ်, သက်ပိုင်ဦး, ဦးသိဝါနန္ဒ, ဇေယျာအေး, တော်ဝင်ကျား, AZM, bonge, ko myo, kozaw.dagon, lamin.pzl, phoetharlay, phyomyintthein, tu tu, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ
မြန်မာနိုင်ငံကနေ KIS/KAV ကို offline updates အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ဒီနေရာကနေ တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် ပုံမှန် Offline Updates တွေ တင်ပေးချင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ Offline Virus Database Updates! ဆိုတဲ့ နေရာက Updates က အချိန်တိုင်း Updates မဖြစ်ပါဘူး။ အဲတာကြောင့် ဖိုရမ် ကြီးကြပ်သူများ တစ်ချက်လောက် အကြံပြုကြပါ။ သဘောတူမယ် ဆိုရင် တင်ပေးပါ့မယ်။ အပတ်စဉ် အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တစ်ခါ Offline Updates ကို ( Sunday ) တိုင်း နေ့စွဲနဲ့ တင်ပေးသွားဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်။
internet ပုံမှန် မသုံးနိုင်တဲ့ မြန်မာက မောင်နှမများအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့။
ကိုဖိုးစည်, ခွန်ညီး, စနိုးလေး, ဆန်းမောင်, ထွန်းဝင်းနိုင်, ဒဿဂီရိ, bonge, ko myo, KznT, sky4ster
Updates Distribution for KAV / KIS 2010
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun Apr 11 15-39-14 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun Apr 11 15-39-14 2010
Updates Distribution for KAV အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Download Links ( ၂ ) ခုထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုကိုပဲ Download ချပါ။
Updates Distribution for KAV 2010.rar (125 MB)
Updates Distribution for KAV 2010.rar 124.990 MB
Updates Distribution for KIS 2010 Sun Apr 11 15-39-14 2010
Updates Distribution for KIS အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Download Links ( ၂ ) ခုထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုကိုပဲ Download ချပါ။
Updates Distribution for KIS 2010.rar (129.6 MB)
Updates Distribution for KIS 2010.rar 129.629 MB
Last edited by KznT; 11-04-2010 at 07:37 PM..
ခွန်ညီး, ဂတုံးလေး, စနိုးလေး, ဒဿဂီရိ, AZM, bonge, ko myo, sky4ster, tu tu, yawnathan, zo
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun Apr 18 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun Apr 18 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (125.3 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun Apr 18 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (130 MB)
ဂတုံးလေး, ဒဿဂီရိ, AZM, ko myo, sky4ster, tu tu, zo
25-04-2010, 08:46 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun Apr 25 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun Apr 25 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (126.3 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun Apr 25 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (131 MB)
Last edited by KznT; 25-04-2010 at 08:49 PM..
ဂတုံးလေး, ဒဿဂီရိ, ko myo, tu tu, yawnathan, zo
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 51 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကွန်တော်က kaspersky internet security ကိုသုံးတာပါ kaspersky internet security ကို kis လို့ခေါ်တာလား ခင်ဗျ
ပြီးတော့ ကွန်တော် အခုသုံးနေတာက kaspersky internet security 2010 trail version ပါ သူကရက် ၃၀ ပဲဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ်တယ်ဗျ......အဲ့ဒါကီးလေးများရနိုင်မာလားလို့
Find More Posts by ထွန်းဝင်းနိုင်
28-04-2010, 04:18 PM
ဟုတ်ပါတယ် ကိုထွန်းဝင်းနိုင်ရေ KIS ဆိုတာ Kaspersky Internet Security ပါ။ KAV ဆိုတာ Kaspersky Antivirus ပါ။ Trail Version နဲ့ မသုံးချင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကီးထည့်သုံးရင်ရပါတယ်။ ကီးထည့်သုံးတာကလည်း အလုပ်နည်းနည်းတော့ ရှုပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ Kaspersky Lab ကနေ ကီးတွေကို စစ်တဲ့ အခါ သူ့မူရင်း ကီး မဟုတ်ရင် Back list ခဏခဏ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲလို ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့ keys က Black Lists ဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင် နောက်ထပ် ကီးတစ်ခု အင်တာနက်ထဲမှာ ပြန်လိုက်ရှာပြီး ဒေါင်းလုပ်ချရ။ ပြန်ထည့်ရ လုပ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကီးရှာရတာကလည်း မသိရင်သာ ဒုက္ခများတာပါ။ ရှာတတ်သွားရင် ကီးရှာရတာ သိပ်မကြာပါဘူး။ ဒီ myanmarfamily ထဲမှာပဲ Kaspersky ကီးတွေ Update လုပ်ပြီး တင်ပေးနေတဲ့ နေရာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် အများဆုံး keys ယူတဲ့နေရာကတော့ ဒီနေရာမှာပါ။ အဲ့ဆိုဒ်ကို ရောက်ရင် Search box မှာ kaspersky လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း အနည်းမနော ကီးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ကတော့ Torrent သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ Torrent သုံးနည်းကတော့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အသေးစိတ် ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ သွားဖတ်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ကိုဖိုးစည်, ဂတုံးလေး, စနိုးလေး, ထွန်းဝင်းနိုင်, ဒဿဂီရိ, ဖိုးထင်လင်း, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, တော်ဝင်ကျား, ko myo, maungwanna, tu tu, Ye Aung, zo
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun May22010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun May22010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (129.5 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun May22010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (134.3 MB)
Last edited by KznT; 07-06-2010 at 12:33 PM..
ကိုဖိုးစည်, ဂတုံးလေး, စနိုးလေး, ဒဿဂီရိ, ဦးသိဝါနန္ဒ, တော်ဝင်ကျား, aungko2010, ko myo, tu tu, zo
မရပ်မနားတမ်း :28: ဟစ်ကြွေးကြမယ် :drum:
I like Rocker Group
Iron Cross my crazy
:sword: လာမယှဉ်နဲ့ သေသွားမယ်
Find More Posts by aungko2010
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 29 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီတော့ပစ်ရဲ့အစမှာ ဖတ်လေဗျာ... သေသေချာချာရှင်းပြထားတာ... ကောင်းလွန်းလို့ ဘာလေးများလိုပါသေးလို့တောင် မေးစရာမလိုလောက်အောင်ပါပဲ... သေသေချာချာဖတ်ဗျ... ဒီတော့ပစ်အပေါ်ဆုံးမှာနော်... ပို့စ်နံပါတ် ၁... ဒီမှာ နှိပ်လည်းရပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ nandarkyaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, KznT, tu tu
Find More Posts by nandarkyaw
ကျွန်တော် နည်းနည်း အူလည်လည် ဖြစ်နေတယ် - ဘယ်ဒေါင်းနည်းကို မေးတာလည်း မသိဘူး။ ကျွန်တော် တင်ထားတဲ့ Offline Updates တွေကို ဘယ်လို ဒေါင်းရတာလဲ လို့ မေးတာများလား - ??
အဲတာပဲ ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ ကိုအောင်ကိုရေ >>
ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ Offline Updates တွေမှာ ပါတဲ့ Database တွေကို Up to date ဖြစ်အောင် အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်း ကျွန်တော် နေ့စွဲတွေနဲ့ တစ်ပတ်တစ်ခါ တင်ပေးနေပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင်တော့ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာပါ။ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာကို ဒေါင်းလုပ်မချချင်ဘူး ဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သုံးနိုင်မယ် ဆိုတာ အသေးစိတ် ရေးပြထားပါတယ်။ အဲ့အတိုင်း လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ပြီး Offline Updates လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အခု တင်ပေးထားတာတွေက အမြဲတမ်း internet connection မရနိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မောင်နှမတွေအတွက် ( တစ်ပတ်တန်သည် နှစ်ပတ်တန်သည် မှ တစ်ခါ ) Offline updates ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး သုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ သဘောပါ။
ဒေါင်းလုပ်ချမယ် ဆိုရင်တော့ အပတ်စဉ်လိုက် ကျွန်တော် တင်ပေးထားတာတွေထဲက နောက်ဆုံးတင်ပေးထားတဲ့ Date နဲ့ ( ဥပမာ >> Updates Distribution for KAV 2010 Sun ?? ??? 2010 စသဖြင့် ) နောက်ဆုံးရှိနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ကိုယ်သုံး Antivirus နဲ့ဆိုင်တဲ့ Offline Updates တစ်ခုကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့လိုပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ချနည်း မသိလို့ ထပ်ရှင်းရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ Updates Distribution ဆိုတာတွေရဲ့ အောက်မှာ ခုလို Links တွေရှိပါတယ်။
အဲ့ Links တွေထဲက အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ကိုအောင်ကိုသုံးတဲ့ KIS / KAV တစ်ခုခု အောက်က Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ( KIS နဲ့ KAV မရောဖို့နဲ့ Versions မမှားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အဲတာတွေကို အပေါ်မှာ ရှင်းပြထားပြီးသားမို့လို့ ထပ်မရှင်းတော့ပါ။ ) အဲလို သက်ဆိုင်ရာ Links တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခုလို စာမျက်နှာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော် ဝိုင်းပြထားတဲ့ Download ဆိုတာတွေ တန်းစီ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အကုန်လုံး လိုက်နှိပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲ Multiupload ကို သုံးပြီး ဆိုဒ်အများကြီးမှာ ခွဲတင်ပေးထားတဲ့ သဘောပါ။ Links တွေ အများကြီးထဲက ကိုအောင်ကို နှစ်သက်ရာ တစ်ခုကိုပဲ Download ဆိုတဲ့နေရာမှာ Click ပေးလိုက်ပါ။ များသော အားဖြင့်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို Rapidshare တို့ ၊ Megaupload တို့က ဒေါင်းလုပ်ချရတာ အဆင်ပြေကြတာ များပါတယ်။
အဲတော့ ကျွန်တော် ဥပမာ အနေနဲ့ Megaupload ကို Target ထားပြီး သူ့ဘေးက Download ဆိုတာကို Click ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ နောက်စာမျက်နှာမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ခပ်ဆင်ဆင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
here : လို့ ဖော်ပြထားတဲ့နေရာမှာ သူဖြည့်သွင်းခိုင်းတဲ့ Code ကို ထပ်တူဖြည့်သွင်းပေးရပါမယ်။ စာလုံး အကြီးအသေးကတော့ ဒီနေရာမှာ အရေးမကြီးပါဘူး။ သူပြထားတဲ့ အေ ဆို အေ ၊ ဘီ ဆို ဘီ တိတိကျကျ ရိုက်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အဲလို သူဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အတိအကျဖြည့်သွင်းပြီးသွားရင် Download File ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။
အဲလိုနှိပ်လိုက်ရင် သူကနေပြီး အဲ့ဖိုင်ကို Download ချဖို့အတွက် ၄၅ စက္ကန့် စောင့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကိုတော့ Download File ကို နှိပ်လိုက်ပြီးတည်းက စတင်ရေတွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း မြင်နေရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုသိရမှာ သူနဲ့တူတူတွဲပေါ်နေတဲ့ သူ့အပေါ်က Premium Download ဆိုတာကို မနှိပ်ပါနဲ့။ သူက ပိုက်ဆံပေးသုံးတဲ့သူတွေ သုံးတာပါ။ ကျွန်တော်တို့က အလကား သုံးမယ့်သူ မို့လို့ Regular Download ကိုပဲ မပျက်မကွက် နှိပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
သူစောင့်ခိုင်းတဲ့ ၄၅ စက္ကန့် ပြည့်ရင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Regular Download ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲတာကို နှိပ်ပြီး Download ချနိုင်ပါပြီ။
ဂတုံးလေး, စနိုးလေး, သန့်ဇင်ဌေး, ဦးသိဝါနန္ဒ, aungko2010, ko myo, tu tu, tun ko, Ye Aung, zo
ကို kztnရေ ဦးဇင်းတစ်ခုလောက်မေးဦးမယ်ကွာ၊Temp ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ် Update.bat ကို ပြန် run ပြီး updates ကို ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချတဲ့ အချိန်မှာ ( ၁ ) ကနေ ပြန်စချစရာ မလိုပဲ လိုအပ်တဲ့ နောက်တိုး updates လေးတွေကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့လိုအောင် နဂိုအတိုင်း ထားရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပါ၊ ဘာလဲဆိုတော့ srart> Run> Temp ကိုဖွင့်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ရင် အထက်က ဒါကလေးပြောတဲ့Tempထဲက ဖိုင်တွေပျက်သွားလား ဆိုတာပါဆိုတာသိချင်လို့ပါ၊နောက်ပြီး Updateလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကီးလည်းစရာလို့လား၊Downloadလုပ်တဲ့အခါ Updater.bat file အား အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ဒါကာလေး တင်ပေးပြီးသားOffline Updatesဖိုင်ကို Downloadလုပ်ခြင်းတို့ ထူးခြားမှုရှိသလား ရှိရင်ထူးခြားသည့်အကြောင်းလေးကို သိချင်လို့ပါဗျာ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဦးဗျာ၊ အမေးအမြန်းထူတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဗျာ၊ ဦးဇင်းက ဘာမှ မသိသေးတော့ နားမလည်လို့ပါ၊
ဦးဇင်း ဘုရား -
အရှင်ဘုရား မေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တပည့်တော် မဖြေကြားခင်မှာ ဘုရားတပည့်တော် အဦးဆုံး လျှောက်ထားလိုတာလေး ရှိပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော်က မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ မှန်ပေမယ့် ဘုရားကျောင်းကန် ရောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကလွဲရင် ကိုရင် ၊ ဦးဇင်း ၊ ဘုန်းဘုန်းတွေ နဲ့ တပည့်တော် စကားလက်ဆုံ အချိန်ကြာကြာ ပြောဆိုခဲ့ဖူးခြင်း မရှိခဲ့လို့ တပည့်တော် အရှင်ဘုရားရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြားတဲ့ အချိန်မှာ ဒကာနဲ့ ဦးဇင်းကြားမှာ သုံးနှုန်းရမယ့် စကားလုံး အသုံးအနှုန်း အပြောအဆို အရေးအသား မှားယွင်းမှုများ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် တပည့်တော်ရဲ့ စကားပြော အရည်အချင်း မသိမ်မွေ့မှုကို ခွင့်လွှတ်နားလည်နားလည်နိုင်စေဖို့ ဦးစွာ လျှောက်ထားလိုပါတယ် ဘုရား။
တပည့်တော် Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ ဆိုပြီး ရေးခဲ့တုန်းက တစ်ခု လိုသွားတာလေး အရှင်ဘုရား ခုလို ထောက်ပြလိုက်မှ တပည့်တော် ပြန်မြင်မိပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော် တစ်ဆင့်ချင်း ပြန်ရှင်း ပေးသွားပါ့မယ်။
အရှင်ဘုရား မေးမြန်းတဲ့ မေးမြန်းချက် အရ အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ တပည့်တော် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ ဆိုတဲ့ ( ၃ ) နည်းထဲက ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ Updater.bat file အား အသုံးပြု၍ install လုပ်ဆောင်ခြင်း။ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနေတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
တပည့်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်။ Temp ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ် Update.bat ကို ပြန် run ပြီး updates ကို ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချတဲ့ အချိန်မှာ ( ၁ ) ကနေ ပြန်စချစရာ မလိုပဲ လိုအပ်တဲ့ နောက်တိုး updates လေးတွေကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့လိုအောင် နဂိုအတိုင်း ထားရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတာ - အဲဒီ စာကြောင်းကို ဦးဇင်း မေးမြန်းတော့မှ တပည့်တော် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တော့ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာနားမရှင်းအောင် တပည့်တော် ရေးထားတာ သွားတွေ့မိပါတယ် ဘုရား။ နောက်ပြီး တပည့်တော် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဲ့ဖော်ပြချက်ကလည်း တပည့်တော် ဆိုလိုချင်တာနဲ့ တော်တော်လေး လွဲနေတာ တပည့်တော် သွားတွေ့ရပါတယ်။ တပည့်တော် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Temp ကတော့ နောက်တစ်ကြိမ် Update.bat ကို ပြန် run ပြီး updates ကို ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချတဲ့ အချိန်မှာ ( ၁ ) ကနေ ပြန်စချစရာ မလိုပဲ လိုအပ်တဲ့ နောက်တိုး updates လေးတွေကိုပဲ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့လိုအောင် နဂိုအတိုင်း ထားရှိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်က မှားယွင်းနေတာ မဟုတ်ပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပါတယ် ဘုရား။
အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အလွယ်ကူဆုံးလုပ်ဆောင်နည်းက ဒီလိုပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့ Update.bat ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို double-click ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ command prompt windows ပေါ်လာပြီး သက်ဆိုင်ရာ KIS ဆို KIS ၊ KAV ဆို KAV - Updates တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး download စချတဲ့ အချိန်ဆိုရင် internet connection speed ပေါ်မူတည်ပြီး နာရီဝက် နဲ့ ၁ နာရီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြာမြင့်လိမ့်မယ်လို့ တပည့်တော် သုံးသပ်မိပါတယ်။ Speed ကောင်းရင်တော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး မြန်နိုင်ပါတယ်ဘုရား။ သူ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ပြီးတဲ့အချိန်မှာ တပည့်တော်တို့ ဒီလို ပုံအတိုင်း Temp နဲ့ Updates ဆိုတဲ့ ဖိုင် ( ၂ ) ခုကို နဂိုရှိပြီးသား ဖိုဒါထဲမှာ နောက်တိုးတွေ့ရမှာပါ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
အခု အရှင်ဘုရားမေးတဲ့ အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီ။
start> Run> Temp ကိုဖွင့်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ရင် အထက်က ဒါကလေးပြောတဲ့Tempထဲက ဖိုင်တွေပျက်သွားလား ဆိုတာပါ။
မပျက်ပါဘူးဘုရား။ Temp ချင်း တူပေမယ့် အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ start> Run> %temp% ဆိုတဲ့ ဖိုဒါက တပည့်တော်ရဲ့ စက်အနေနဲ့ ပြောရရင် C:\_DOCUME~1\_KZNT~1\_LOCALS~1\_Temp ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရှိတာပါ ဘုရား။ အရှင်ဘုရား အောက်ဖော်ပြပါ ပုံကို ကြည့်တော်မူပါ။
တပည့်တော်တို့ ခု Download ချလိုက်တဲ့ KIS/KAV ဖိုင်တွေက တပည့်တော် စက်ထဲမှာဆိုရင် F:\_Warez\_Maintenance software\_Antivirus\_Kaspersky\_Kaspersky internet security\_KIS_9.0.0.459_463_736 မှာ တည်ရှိပါတယ် ဘုရား။ ( အရှင်ဘုရားစက်နဲ့ တပည့်တော် စက်က Partition ဖွဲ့စည်းပုံချင်း မတူညီနိုင်လို့ ခုပုံအတိုင်း တည်ရှိချင်မှ တည်ရှိပါလိမ့်မယ် ဘုရား - အရှင်ဘုရားရဲ့ စက်မှာ ဖော်ပြပါ Temp နဲ့ Updates ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတွေက တစ်ခြား Partitions တစ်ခုခု မှာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ) အရှင်ဘုရား အောက်ဖော်ပြပါ ပုံကို ကြည့်တော်မူပါ။
C:\_DOCUME~1\_KZNT~1\_LOCALS~1\_Temp နဲ့ F:\_Warez\_Maintenance software\_Antivirus\_Kaspersky\_Kaspersky internet security\_KIS_9.0.0.459_463_736 ဆိုတာ Directory ချင်း မတူညီတာ မို့လို့ တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်လည်း နောက်တစ်ခုက ပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဘုရား။
တပည့်တော် ဒီ့ထက်မြင်သာအောင် ဥပမာပေးရရင် အရှင်ဘုရား သီတင်းသုံးနေတဲ့ ကျောင်းဆောင်ရဲ့ ရှေ့နဲ့ နောက်မှာ ဗူးစင် နှစ်စင်ရှိပြီး နှစ်စင်လုံးက ဗူးသီးသီးနေတာ မှန်ပေမယ်လို့ အရှင်ဘုရားက ကျောင်းဆောင်နောက်မှာ သီးနေတဲ့ ဗူးစင်က ဗူးသီးကို ခူးလိုက်တာနဲ့ ကျောင်းဆောင်ရှေ့မှာ သီးနေတဲ့ ဗူးစင်က ဗူးသီး ပျောက်မသွားသလိုမျိုးပါပဲ။ Directory မတူတဲ့ နေရာ ( ၂ ) ခုက ဖိုင် ( ၂ ) ခုဟာ နာမည်တူနေသည့် တိုင်အောင်တောင် တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်ရင် တစ်ခုက လိုက်မပျက်တတ်ပါဘူး ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ တစ်ခု လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုတာက Updates ချပေးမယ့် Updater.bat ပါတဲ့ ဖိုဒါကို C:\_DOCUME~1\_KZNT~1\_LOCALS~1\_Temp ဆိုတဲ့ ဖျက်ပစ်လို့ရတဲ့ Temp ဖိုဒါအောက်မှာ မထားပဲ တစ်ခြား Partition တစ်ခုအောက်မှာ ထည့်သွင်းထားလိုက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ် ဘုရား။ အဲလိုဆိုရင် အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ start> Run> %temp% ဆိုပြီး Temp ဖိုင်တွေကို တပည့်တော်တို့ ဝင်ဖျက်လည်း တပည့်တော်တို့ရဲ့ Updates ချပေးထားတဲ့ Temp ဖိုဒါက ပျက်မသွားပါဘူးဘုရား။
နောက်တစ်ချက် အနေနဲ့ တပည့်တော် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နားလည်ရခက်နေတဲ့ ဖော်ပြချက် တစ်ခုကို ပြန်လည် ဖြေရှင်းပေးသွားပါ့မယ်။ တပည့်တော်တို့ Updater.bat ကို သုံးပြီး KIS/KAV updates တွေကို Download ချပြီးသွားတဲ့ နောက်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Temp နဲ့ Updates ဆိုပြီး နဂိုမူရင်း ဖိုဒါထဲမှာ ဖိုင် ( ၂ ) ခုတိုးလာတာ တပည့်တော်တို့ သတိထားမိပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ KIS/KAV ကို offline updates လုပ်ဆောင်ဖို့ အဲ့ ( ၂ ) ဖိုင်ထဲက Updates ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကိုပဲ တပည့်တော်တို့ အသုံးပြုဖို့ လိုပါတယ် ဘုရား။ အဆင့်လိုက် ဘယ်လို Updates လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာတော့ တပည့်တော် ပုံနဲ့ တကွ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားမို့ ဒီနေရာမှာ မဖော်ပြတော့ပါဘူး ဘုရား။ အဲလို တပည့်တော်တို့ ပထမအကြိမ် ဒေါင်းလုပ်လည်း ချအပြီး - ရလာတဲ့ Updates ဖိုဒါကို သုံးပြီး သက်ဆိုင်ရာ KIS/KAV ကို Updates လုပ်ပြီး သွားပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ - တကယ်လို့ တစ်ပတ် တန်သည် - နှစ်ပတ်တန်သည် ကြာလို့ offline updates ပြန် download ချမယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါ ဖိုဒါ ( ၂ ) ခုထဲက Temp ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ချန်ထားပြီး updates ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို Delete လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတဲ့နောက်မှာမှ Updater.bat ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို အရှင်ဘုရား ပြန် Run ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
အဲလို တပည့်တော်တို့ လုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Command prompt တက်လာပြီး ပထမဆုံး အကြိမ် လုပ်ဆောင်စဉ်က အတိုင်း Updates တွေကို ဒေါင်းလုပ်ပြန်ချပါလိမ့်မယ် ဘုရား။ ဒါပေမယ့် ခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ ဖော်ပြပါနေရာမှာ Temp ဖိုဒါ ရှိနေတဲ့အပြင် အဲ့ဖိုဒါထဲမှာလည်း အရင်တပည့်တော်တို့ ဒေါင်းလုပ်ချထားပြီးသား Updates အဟောင်းတွေ ပါဝင်နေပြီးသားမို့လို့ အသေးစိတ်ထိ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ မလိုတော့အပ်တော့ပဲ တစ်ပတ်ဆို တစ်ပတ် - နှစ်ပတ် နှစ်ပတ် Updates မပေးခဲ့တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ ကွာဟသွားတဲ့ databases တွေကိုပဲ Updater.bat ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပေးသွားပါလိမ့်မယ် ဘုရား။ အရှင်ဘုရားလုပ်ဆောင်ကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး တပည့်တော်တို့လုပ်ဆောင်ချိန်ကလောက် မကြာတော့ပဲ ၁၀ မိနစ်လောက်နဲ့ Updates လုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားပြီး အခုနက တပည့်တော်တို့ Delete လုပ်လိုက်တဲ့ Updates ဆိုတဲ့ ဖိုဒါနေရာမှာ နောက်ထပ် Updates ဆိုတဲ့ ဖိုဒါတစ်ခု အသစ်ပြန်ရောက်နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ တပည့်တော်တို့ အခု Updates လုပ်လိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးရ Updates ဖိုဒါပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
အရှင်ဘုရားမေးတဲ့ နောက်မေးခွန်း တစ်ခုကို တပည့်တော် ဆက်ပြီး ဖြေကြားပါ့မယ်။
Update လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကီးလဲစရာလိုလား၊
ပုံမှန်အားဖြင့် Kaspersky Labs ကနေပြီး တပည့်တော်တို့ ထည့်ထားတဲ့ ကီးတွေကို Black List မပေးမချင်း ကီးလဲဖို့ မလိုပါဘူး ဘုရား။ Black List ဖြစ်မှသာ လဲပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍ အရှင်ဘုရား offline updates ပေးပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ အရှင်ဘုရားထည့်သွင်းထားတဲ့ ကီးကို Black list ဆိုပြီး ပြခဲ့မယ် ဆိုရင် တပည့်တော်တို့ ကီးအသစ်ထည့်ဖို့လိုပါတယ် ဘုရား။ ကီးတော်တော်များများ ဘယ်နေရာမှာ ရှာလို့ ရမယ်ဆိုတာ တပည့်တော် ဒီနေရာမှာ ရေးထားပါတယ် ဘုရား။
နောက်မေးခွန်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့
Downloadလုပ်တဲ့အခါ Updater.bat file အား အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ဒါကာလေး တင်ပေးပြီးသားOffline Updatesဖိုင်ကို Downloadလုပ်ခြင်းတို့ ထူးခြားမှုရှိသလား
ဆိုတာကို ဘုရားတပည့်တော် ဆက်ပြီး ဖြေကြားပေးသွားပါ့မယ်။
တပည့်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Offline Updates ဖိုင်တွေက အလုပ်ရှုပ် မခံလိုသူအတွက် ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော် ဆိုလိုတာ - offline updates အတွက် သပ်သပ်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ သူမျိုး - အင်တာနက်ဆိုင်ကို ကမန်းကတန်းလာ - တစ်ခြား ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေ ဘာမှ လုပ်စရာမလို - တပည့်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Offline Updates ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး စက်မှာ အသင့် Updates လုပ်လို့ ရနိုင်အောင် တပည့်တော် တစ်ပတ်တစ်ခါ အချိန်ပေးပြီး တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက kaspersky နောက်ဆုံးဗားရှင်း သုံးသူများအတွက် အဆင်ပြေနိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တပည့်တော် တစ်ပတ် တစ်ခါ တင်ပေးထားတဲ့ Offline Updatesဖိုင်ကို download ချပြီး Updates လုပ်တာပဲ ဖြစ်စေ - အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင် Updater.bat file ကို အသုံးပြုပြီး ရရှိလာတဲ့ Updates တွေကိုသုံးပြီးမှ Updates လုပ်တာပဲဖြစ်စေ အားလုံး တူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
အရှင်ဘုရား ထူးခြားချက် အနေနဲ့ ကတော့ တပည့်တော် တင်ပေးမယ့် Offline Updatesဖိုင်ကို download ချပြီး Updates လုပ်မယ် ဆိုရင် တပည့်တော်က တစ်ပတ်မှ တစ်ခါပဲ တင်ပေးနိုင်တာမို့လို့ ကြားရက်တွေမှာ ထွက်တဲ့ update databases တွေကို အရှင်ဘုရား အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပည့်တော် တင်ပေးတဲ့ အချိန်မှသာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်ဘုရားရဲ့ စက်မှာ ရှိနေတဲ့ Antivirus ရဲ့ databases ကို updates လုပ်နိုင်ဖို့ တပည့်တော် တင်အပေးကို အားကိုးတကြီး စောင့်နေရမယ့် သဘောမျိုး ဖြစ်နေပါတယ် ဘုရား။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ရအောင် တပည့်တော် ဒေါင်းလုပ်ချနည်းကိုပါ ပြောပြခဲ့တာပါ ဘုရား။ အရှင်ဘုရား ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒေါင်းလုပ်ချ လုပ်ဆောင်ခဲ့မယ် ဆိုရင် အရှင်ဘုရားရဲ့ Antivirus မှာ ရှိနေတဲ့ Databases - Updates ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ တပည့်တော်အပေါ်မှာ မတည်မှီတော့ပါဘူး ဘုရား။ အရှင်ဘုရား စိတ်ကြိုက် နှစ်သက်ရာ အချိန်မှာ Updates ပေးသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။
တပည့်တော် ရှင်းလင်းချက် အနေနဲ့ ဒီလောက်ပါပဲ ဘုရား။ အရှင်ဘုရား မရှင်းလင်းတာ ရှိခဲ့ဦးမယ် ၊ ဒွိဟ ဖြစ်စရာ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် တပည့်တော်ရေးခဲ့တဲ့ မရှင်းလင်းတဲ့ Posts တွေမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဘုရား။ အားလပ်ချိန်မှာ အမြန်ဆုံး ပြန်ကြားနိုင်အောင် ဘုရားတပည့်တော် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 08-05-2010 at 07:31 PM..
ခွန်ညီး, ဆန်းမောင်, ဒဿဂီရိ, ဝင်းအောင်, သက်ပိုင်ဦး, ဦးသိဝါနန္ဒ, arkaraung, ko myo, konge, kozaw.dagon, tu tu, zo
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun May92010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun May92010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (132.5 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun May92010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (136.9 MB)
Last edited by KznT; 07-06-2010 at 12:32 PM..
ဂတုံးလေး, ဦးသိဝါနန္ဒ, nandarkyaw, tu tu
ပို့စ် 65 ခုအတွက် 445 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုkznTရေ ဦးဇင်းအတွက်တော့ တစ်ခု သိရင် လုံလောက်ပေမယ့် ဦးဇင်းရဲ့ မြို့လေးမှာ နက်ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတယ်၊ ဦးဇင်းက သူတို့ကို Offline Updateတွေ မျှဝေပေးချင်တာ အဲဒါကြောင့် မေးတာပါ၊ ဦးဇင်းစက်မှာတော့ onfine Updateလုပ်တာပါ၊ တခြားသူတွေက နက်မချိတ်ထားတော့ သူတို့ကို ဦးဇင်းအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီချင်လို့ပါ၊
အခုပေးချင်တာကတော့ ပထမနည်းထဲမှာပါတဲ့* ပြီးသွားရင် anti-virus databases ကို Run ပါ။ဆိုတာ ဘယ်နားက Runရမလဲဆိုတာမသိလို့ပါ၊ ပြောပြပါဦး၊
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဦးသိဝါနန္ဒ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဦးသိဝါနန္ဒ
ကိုkznTရေ ဦးဇင်းအတွက်တော့ တစ်ခု သိရင် လုံလောက်ပေမယ့် ဦးဇင်းရဲ့ မြို့လေးမှာ နက်ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတယ်၊ ဦးဇင်းက သူတို့ကို Offline Updateတွေ မျှဝေပေးချင်တာ အဲဒါကြောင့် မေးတာပါ၊ ဦးဇင်းစက်မှာတော့ onfine Updateလုပ်တာပါ၊ တခြားသူတွေက နက်မချိတ်ထားတော့ သူတို့ကို ဦးဇင်းအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီချင်လို့ပါ၊ အခုမေးချင်တာကတော့ ပထမနည်းထဲမှာပါတဲ့* ပြီးသွားရင် anti-virus databases ကို Run ပါ။ ဆိုတာ ဘယ်နားက Runရမလဲဆိုတာမသိလို့ပါ၊ ပြောပြပါဦး၊
တပည့်တော် ဒီ အကြောင်းအရာကို Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်းများ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ထိပ်ဆုံး အမှတ်စဉ် ( ၁ ) ပို့စ်အောက်က * ဒုတိယအဆင့် - ခွဲဝေပြီးသော Update distribution အားအသုံးပြု၍ Internet connection မရှိသော အခြားစက်များတွင် update ပြုလုပ်ခြင်း။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးသားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ဘုရား။ အရှင်ဘုရား မေးမြန်းချက်ကို တပည့်တော် ဆက်စပ်စဉ်းစားမိတော့ အရှင်ဘုရား ဖတ်ရှုမေးမြန်းတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ပဲ * ပထမအဆင့် - Kaspersky lab sever မှ anti-virus databases ပုံမှန်ရရှိနေသော ကွန်ပြူတာမှနေ၍ Updates များအား ခွဲဝေယူခြင်း။ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ခေါင်းစဉ်လွဲမှား ဖတ်ရှုပြီး အဖြေရှာမတွေ့ခြင်း ဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ တပည့်တော် လိုအပ်ချက်ပါ ဘုရား။ တပည့်တော် ဒီ အကြောင်းအရာကို ရေးသားခဲ့စဉ်တုန်းက အသေးစိတ် ရေးမယ်ဆိုရင် ဖော်ပြချက် အရမ်းရှည်လျားပြီး စာဖတ်သူ အတွက် ရှုပ်ထွေးနေမှာ စိုးရိမ်မိလို့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်အလိုက် အသေးစိတ်ကို အတိအကျ တဆင့်ခြင်း မရေးသားဖြစ်ပဲ Animation ပုံနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်တယ် ဆိုတာကိုပဲ တပည့်တော် ပြသမိခဲ့ပါတယ် ဘုရား။
ယခု အရှင်ဘုရားရဲ့ မေးမြန်းချက် အရ တပည့်တော် တဆင့်ချင်း ပုံနဲ့ ပြန်လည် ရှင်းလင်းပေးသွားပါ့မယ်။ တပည့်တော် တို့ အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ ဒီအောက်ဖော်ပြပါ အဆင့်တွေ မလုပ်ဆောင်ခင် - လက်ရှိ တပည့်တော်တို့ စက်ထဲက Partition တစ်ခုခု ( ဥပမာ - C:, D:, E:, F:, .... ) Updates Distribution ( သို့တည်းမဟုတ် ) Offline updates တွေ အားလုံး download ချပြီး ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါ့မယ်။
အဆင့် - ( ၁ ) Kaspersky applications ၏ windows ကိုဖွင့်၍ ညာဘက် အပေါ်ဆုံးထောင့်ရှိ Settings ကို click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၂ ) နောက်ထပ် ပေါ်လာသော box ၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် ရှိနေသော Side bar မှ My Update Center အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း click ပေးပါ။ ထိုသို့ ကလစ်ပေးလိုက်ချိန်တွင် ညာဘက်ခြမ်းရှိ ဖော်ပြချက်များ အခြားပုံစံ တစ်မျိုးသို့ ပြောင်းလဲ သွားပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ( ၃ ) ညာဘက်ခြမ်းရှိ Update source အောက်ရှိ Settings အား ကလစ်ပေးပါ။ နောက် box တစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။
အဆင့် ( ၄ ) Update settings box ၏ Source tab အောက်တွင်ရှိနေသော Add အား click ပေးပါ။ နောက် box တစ်ခု တက်လာပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ( ၅ ) ယခုကဲ့သို့ box တက်လာချိန်တွင် မိမိ၏ Updates Distribution folder တည်ရှိရာ ( တစ်နည်းအားဖြင့် Download ချထားသော Offline Updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ ) နေရာအား အတိအကျ ညွှန်ပြပေးရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိ၏ Download ချထားသော Offline Updates ဖိုဒါသည် Local disk ( C: ) အောက်တွင် တည်ရှိနေသည် ဆိုလျှင် Local disk ( C: ) ဘယ်ဘက်ဘေးရှိ အပေါင်းလက္ခဏာအား တဆင့်ချင်း ဖြန့်ချ၍ မိမိ၏ Offline Updates ဖိုဒါ ရှိရာထိ သွားရောက်ညွှန်ပြပေးပါ။ အကယ်၍ Local disk ( D: ) ( E: ) ( F: ) ... စသဖြင့် အောက်တွင် ရှိနေသည် ဆိုလျှင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ( ၆ ) သက်ဆိုင်ရာ Local Disk .... ဘေးရှိ + လက္ခဏာမှ တဆင့် ဖြန့်ချ၍ ရှာဖွေလျှင် နောက်ဆုံး မိမိ download ချထားသော Offline Updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာအား ယခုကဲ့သို့ တွေ့ရပါမည်။ ( ဤအောက်ဖော်ပြပါပုံသည် ဥပမာ ဖော်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိစက်၏ Offline Updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာကိုလိုက်၍ အသွင်အပြင် တည်နေရာများ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ )
မှတ်ချက် - ဖော်ပြပါ Box တွင် မိမိ Offline Updates ဖိုဒါ တည်နေရာအား အလွယ်တကူ ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ၄င်း၏ တည်နေရာအား အလွယ်တကူ စာရွက် တစ်ရွက်ပေါ်တွင် မှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။
* My Computer အားဖွင့်ပါ။
* မိမိ download ချထားသော Offline Updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာထိ သွားပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း မြင်ရပြီ ဆိုလျှင် ၄င်း၏ Address bar နေရာအား note pad တစ်ခုပေါ်တွင် Copy>Paste လုပ်၍ ဖြစ်စေ ၊ မှတ်ဥာဏ်တွင်းတွင် မှတ်သား၍ ဖြစ်စေ တည်နေရာအား မှတ်သားထားပါ။ ( မိမိ Offline Updates ဖိုဒါ ထားရှိရာ နေရာကို လိုက်၍ စက်တစ်ခုနှင့် တစ်ခု Directory များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း တရားသေ မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ )
* ထိုတည်နေရာအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ Local folders ဘေးရှိ + လက္ခဏာ အား ဖြန့်ချ၍ ရှာဖွေရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ( ၇ ) အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မိမိ Offline Updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာအား တိကျစွာ ညွှန်းဆိုပြီးပြီ ဆိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း OK ကို click ပေးပါ။
အဆင့် ( ၈ ) Update settings box ရှိ Source tab အောက်တွင် ရှိနေသော Kaspersky Lab's update severs ဘေးရှိ check box အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း click ဖြုတ်ပါ။ မည်သည့် အတွက်ကြောင့်နည်း ?? အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် Kaspersky Lab's update severs အား check ပေးမည် ဆိုလျှင် ဖော်ပြပါ စက်ရှိ Kaspersky antivirus သို့တည်းမဟုတ် Kaspersky internet security အတွက် Updates အား Online တွင် ရှိနေသော Kaspersky Lab ၏ update severs မှ တိုက်ရိုက် Updates ရယူမည် ဆိုသည့် သဘောဖြစ်ပြီး လက်ရှိမိမိ တို့ လုပ်ဆောင်နေသည်မှာ Offline updates လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် Kaspersky Lab's update severs အား click ဖြုတ်၍ ၄င်း စာကြောင်း အောက်တွင် တည်ရှိနေသော မိမိတို့ ရွေးချယ်ပေး ခဲ့သည့် Offline updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာကိုသာ check လုပ်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ချိန်တွင် ဖော်ပြပါ ကွန်ပြူတာသည် Online နှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်၍ Online updates လုပ်ဆောင်မည် ဆိုပါက ယခု ကလစ်ဖြုတ်ထားခဲ့သော နေရာတွင် ကလစ်ပြန်ပေး၍ သူ့အောက်ရှိ မိမိတို့ ရွေးချယ်ပေးထားခဲ့ရာ Offline updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာအား ကလစ် ပြန်ဖြုတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းပြန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ( ၉ ) အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ ဆိုလျှင် OK ပေးပါ။
အဆင့် ( ၁၀ ) အောက်ဖော်ပြပါ box တွင်လည်း OK သာလျှင် ထပ်ပေးပါ။
အဆင့် ( ၁၁ ) အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း အားလုံး လုပ်ဆောင်ပြီးလျှင် မူလ Kaspersky applications windows သို့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြန်လည် ရောက်ရှိပါမည်။
အဆင့် ( ၁၂ ) ထိုနေရာမှ နေ၍ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း My Update Center အား click ပေးပါ။ ထို့နောက် တဆက်တစပ်တည်း ညာဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိနေသည့် Start Update အား click ဆက်ပေး၍ Updates လုပ်ငန်း စတင်နိုင်ပါမည်။ ဤ Updates လုပ်ငန်းစဉ်သည် Kaspersky Lab ၏ update severs မှ တိုက်ရိုက် Updates ရယူ လုပ်ဆောင်နေခြင်း မဟုတ်ပဲ မိမိ Download ရယူခဲ့သော Offline updates ဖိုဒါ တည်ရှိရာ နေရာမှ တဆင့် Updates လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ( ၁၃ ) Updates လုပ်ငန်း စတင်ချိန်တွင် 0% နှင့် စတင်ပြီး 100% တွင် updates လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ( ၁၄ ) Updates လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် မိမိ Databases status သည် မိမိ update လုပ်ဆောင်ခဲ့သော နေ့စွဲနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း up to date ဖြစ်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
တပည့်တော် ရှင်းလင်းချက် အနေနဲ့ ဒီလောက်ပါပဲ ဘုရား။ KIS 2010 နဲ့ KAV 2010 နှစ်ခုစလုံးက Offline updates လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ချင်း တစ်ပုံစံတည်း မို့ တပည့်တော် ယခု ရှင်းလင်းချက်မှာ KAV တစ်ခု အတွက်ပဲ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ဘုရား။ KIS 2010 အတွက် လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုရင်လည်း အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်တွေ အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် အရှင်ဘုရား။ အရှင်ဘုရား မရှင်းလင်းတာ ရှိခဲ့ဦးမယ် ၊ ဒွိဟ ဖြစ်စရာ ရှိခဲ့မယ် ဆိုရင် တပည့်တော်ရေးခဲ့တဲ့ မရှင်းလင်းတဲ့ Posts တွေမှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ဘုရား။ အားလပ်ချိန်မှာ အမြန်ဆုံး ပြန်ကြားနိုင်အောင် ဘုရားတပည့်တော် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
Last edited by KznT; 10-05-2010 at 11:28 AM..
ဂတုံးလေး, ဒဿဂီရိ, ဦးသိဝါနန္ဒ, konge, tu tu, zo
16-05-2010, 02:26 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun May 16 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun May 16 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (133.3 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun May 16 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (137.9 MB)
Last edited by KznT; 07-06-2010 at 12:30 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, ဝင်းအောင်, ဦးသိဝါနန္ဒ, tu tu, zo
23-05-2010, 02:19 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun May 23 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun May 23 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (134.4 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun May 23 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (139.1 MB)
Last edited by KznT; 07-06-2010 at 12:29 PM..
ဝင်းအောင်, tu tu, Ye Aung, zo
30-05-2010, 02:44 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun May 30 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun May 30 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (135.2 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun May 30 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (140.1 MB)
Last edited by KznT; 07-06-2010 at 12:23 PM..
ထွန်းဝင်းနိုင်, ဝင်းအောင်, သိန်းထိုက်ဟိန်း, hope4future, tu tu, zo
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Mon June 07 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Mon June 07 2010
Updates Distribution for KIS 2010 Mon June 07 2010
ဝင်းအောင်, kozaw.dagon, tu tu, zo
13-06-2010, 05:21 PM
အထက်မှာဖေၞပြထားတဲ့ ဖိုင်ကို အဆင်ပြေမယ်ဆို ပြန်တင်ပေးပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါ
13-06-2010, 05:30 PM
KLUpdater.zip 0.897 MB
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun June 13 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun June 13 2010
Updates Distribution for KIS 2010 Sun June 13 2010
Last edited by KznT; 20-06-2010 at 08:54 PM..
ကိုဦး, ဒဿဂီရိ, ဝင်းအောင်, tu tu
20-06-2010, 09:31 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun June 20 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun June 20 2010
Updates Distribution for KIS 2010 Sun June 20 2010
ကိုဦး, ဝင်းအောင်, tu tu
27-06-2010, 04:16 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun June 27 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun June 27 2010
Updates Distribution for KIS 2010 Sun June 27 2010
ဝင်းအောင်, thureinsoe, tu tu
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun July42010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun July42010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (135.3 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun July42010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (140.2 MB)
ဝင်းအောင်, ဇေယျာအေး, tu tu
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun July 11 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun July 11 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (135.4 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun July 11 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (140.3 MB)
ဝင်းအောင်, ဇေယျာအေး, thureinsoe
19-07-2010, 01:05 PM
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun July 18 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Sun July 18 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.rar (135.6 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Sun July 18 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.rar (140.4 MB)
Update !! ကျွန်တော် အပတ်တိုင်း Kaspersky Offline Updates တွေ ပုံမှန် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုခံရမှု သိပ်မရှိတာက တစ်ကြောင်း ၊ လုပ်ဆောင်ပုံ လုပ်ဆောင်နည်းကို အဆင့်လိုက် ကျွန်တော် ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးတာက တစ်ကြောင်း ၊ ကျွန်တော့် အနေနဲ့လည်း မလိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုကို အပတ်တိုင်း အချိန်ပေးပြီး လုပ်ဆောင်နေရတာ မလွယ်ကူတဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ မိသားစုဝင်များအတွက် မလိုအပ်လောက်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့ ဒီ Kaspersky Offline Updates ကို ကျွန်တော် ဒီတစ်ပတ်ကနေ စတင်ပြီး မတင်ပေးတော့ပါဘူး - အကယ်၍ step အလိုက် လုပ်ဆောင်ဖို့ အဆင်မပြေသူများ - လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို နားလည်သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Download ချဖို့ ခက်ခဲနေသူများ ကျွန်တော့် အောက်ဖော်ပြပါ mail ကို ဆက်သွယ်ပြီး Kaspersky Offline Updates တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Last edited by KznT; 28-07-2010 at 11:14 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
17-08-2010, 01:10 AM
maJunior လိုတယ်ဆိုလို့ နောက်တစ်ခေါက် ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်များမှာလည်း လိုတဲ့သူများရှိရင် PM လိုက်ပါ။ လိုချင်တဲ့သူ မရှိပဲ တင်ပေးတော့ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အလုပ်များသလို - ဖိုရမ်အတွက်လည်း အမှိုက်ဖြစ်စေလို့ပါ။
Kaspersky Internet Security 2010 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2010 တို့အတွက် Offline Updates မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Mon August 16 2010 ဖြစ်ပါတယ်။
Updates Distribution for KAV 2010 Mon August 16 2010
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.part1.rar (52.5 MB)
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.part2.rar (52.5 MB)
Updates for_KAV_9.0.0.459_463_736.part3.rar (30.2 MB)
Updates Distribution for KIS 2010 Mon August 16 2010
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.part1.rar (57.2 MB)
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.part2.rar (57.2 MB)
Updates for_KIS_9.0.0.459_463_736.part3.rar (26.5 MB)
မိုးကောင်းကင်, arkaraung, kyaukphyu, maJunior, zo
25-05-2011, 02:39 AM
အကိုရေ ဒီပို့လေးက သိပ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်
အရင်တုန်းက အင်တာနက်ရနေတာကတကြောင်း ကီးကိုလဲအလွယ်တကူရနေတာကတကြောင်းမို့ ကိုယ်တိုင်မစမ်းကြည့်ခဲ့မိဘူးး
ဒါနဲ့ မနေ့က ကွန်ပြူတာတလုံးကိုဝင်းဒိုးတင်ပေးရင်းး အကိုပြောတဲ့ ဒုတိယနည်း updater.bat.file အသုံးပြုပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်
အပ်ဒိတ်တာဘတ်ဖိုင်နဲ့ ကျနော့်စက်ကနေ ကပ်စပါအပ်ဒိတ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်
နောက် အင်တာနက်မရတဲ့စက်မှာ kav2010 sofeware ကိုရမ်းလိုက်ပါတယ်
ကပ်စပါအပ်ဒိတ်ကလဲ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ ကျနော့်ဆီမှာရှိပြီးသားပေါ့
ခက်တာက ကပ်စပါစကီးအပ်ဒိတ်စင်တာက ကျနော်အောက်ကပုံထဲမှာပြထားသလိုမှိန်နေတယ်ဗျာ အဲတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး
ကျနော်မလုပ်တတ်လို့ပါ ပြောပြပေးပါအုံး အကိုကေဇက်ရာ
25-05-2011, 03:32 AM
Originally Posted by sky4ster
ကပ်စပါအပ်ဒိတ်ကလဲ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသားဆိုတော့ ကျနော့်ဆီမှာရှိပြီးသားပေါ့
ခက်တာက ကပ်စပါစကီးအပ်ဒိတ်စင်တာက ကျနော်အောက်ကပုံထဲမှာပြထားသလိုမှိန်နေတယ်ဗျာ အဲတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး - ကျနော်မလုပ်တတ်လို့ပါ ပြောပြပေးပါအုံး အကိုကေဇက်ရာ
အခုလိုမျိုး ပုံလေးနဲ့ ဖော်ပြပြီး မေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတာကို တစ်ခါတည်း သိရတာပေါ့ - မှန်ရာပြောရရင် ကျွန်တော် Kapersky မသုံးဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ - တစ်ခြားပေါ့တဲ့ Antivirus တစ်ခုကိုပဲ ပြောင်းသုံးနေဖြစ်တယ်။ အဲ့တာကြောင့် ခုမေးတဲ့ ပြဿနာကို ကျွန်တော် ပုံတွေ အများကြီးနဲ့ အသေးစိတ် မပြနိုင်တာ နားလည်ပေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နားလည်ထားသလောက် လမ်းညွှန်ပေးပါမယ်။ ပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ အခြေအနေအရ Update ပေးလိုက်ပေမယ့် Kaspersky ရဲ့ Status bar နီမြဲနီနေတာဟာ Application is not activated. လို့ ခေါ်တဲ့ License မသွင်းထားရသေးလို့ပါ။ အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာ License key ရှာပြီး ထည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ License key တွေကိုတော့ မြန်မာဆိုဒ်ထဲမှာ ဆိုရင် ကောင်လေးငယ်မှာ အမြဲလိုလို တင်ပေးထားတာ တွေ့မိတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့နေရာနဲ့ အဆင်မပြေရင် ဒီနေရာမှာ လည်း နေ့တိုင်းလိုလို ပုံမှန်တင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ( Search ကနေ kaspersky လို့ ရိုက်ရှာပါ။ ) KAV 2010 ကီးသွင်းနည်းက ဖိုရမ်မှာလည်း ရေးထားပြီးသား ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြန်ရှာပေးဖို့ရာ ကျွန်တော်က ရှာတာဖွေတာညံ့တော့ သိပ်အဆင်မပြေတာနဲ့ နောက်တစ်ခေါက်ပဲ ပုံနဲ့ ပြပေးလိုက်ပါမယ်။
1. အရင်ဆုံး အောက်နားမှာ ရှိတဲ့ Kaspersky License Manager ကိုဝင်ပါ။
2. Activate new license button ကနေ ဆက်သွားပါ။
( trial key မျိုး သွင်းထားတာ ရှိရင် Delete လုပ်ပါ။ key နဲ့ ကပ်လျက်က ကြက်ခြေခတ်ပုံ X ကို click ပေးလိုက်တာနဲ့ Delete လုပ်ပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ )
3. စက်မှာ Internet connection ရှိရင် Disable ပေးပါ။
4. Select activate commercial license ကို Select ပေးပြီး - Activation license code မှာ 11111-11111-11111-1111X လို့ထည့်ပါ။
5. Internet connection ကို Disable ပေးထားတာမို့လို့ Error dialog box တက်လာပါလိမ့်မယ်။
6. Ok ပေးလိုက်ရင် key file ထည့်ဖို့ box တစ်ခု ပေါ်လာပြီး အဲ့ကနေ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ပြီးတဲ့ ဆိုဒ် အသီးသီးက ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရလာတဲ့ key file ကို Browse ကနေ ခေါ်ထည့်ပြီး kaspersky ကို activate ပေးပါ။
အသေးစိတ် လုပ်ဆောင်ပုံကို ပုံနဲ့ အောက်မှာ ထပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှာတော့ KIS 2010 အတွက် ပြထားတယ်ဆိုပေမယ့် KIS 2010 နဲ့ KAV 2010 License key ထည့်ပုံခြင်း တူတူပါပဲ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Last edited by KznT; 25-05-2011 at 04:03 AM..
စနိုးလေး, သန့်ဇင်ဌေး, blackNwhite, sky4ster
antivirus, how to, internet, kaspersky
Kaspersky Anti-Virus 2009 မောင်မျိုးမင်း-& Software များဆိုင်ရာ 13 26-10-2009 09:16 PM